Muwaadin Somaliyeed oo deyn u qaatay sidii weeraro ugu geysan lahaa dalka Ingiriiska | Wakaaladda Wararka Hiilnews
Muwaadin Somaliyeed oo deyn u qaatay sidii weeraro ugu geysan lahaa dalka Ingiriiska
Arbaco, Feb 14, 2018(HNN) Muwaadin soomaaliyeed oo laxiray isagoo doonaya in uu ku Biiro ururka Daacish ayaa la ogaaday in uu Bangi ka deeynsaday lacag dhan 10,000 oo Euro oo u dhiganta 12,362 Dolar ka Mareeykanka ah, Sida uu daabacay Wargeyska telegraph ee ingiriiska kasoo baxa.
Muwaadinkaan oo magaciisa lagu sheegay Aweeys Shiikheey ayaa Bangiga u sheegay in uu Lacagta ugu Baahanyahay si uu ugu guursado, laakiin waxaa la ogaaday in uu ku talo galay in uu ugu safro Siiriya si uu Daacish ugu Biiro.
Wuxuu ahaa 38 jir Darawal ka ah Gaari Badeecooyinka daabula wuxuuna inkiray in uu diyaarinayay weerarro Argagixiso iyo in uu Dad kale kala dooday Dilka Boqoradda UK iyo ra’iisul wasaarihii hore ee ingiriiska David Camiroon.
Xeer ilaalinta eedeeymaha Aweeys Shiikhoow Gacanta ku haya ayaa sheegay in uu ka hadlay in laweeraro Yahuud Dagan Degmadda Stamford Hill ee ku taalla Waqooyi bari Magaaladda London ee Caasimadda Ingriiska iyo in Qori AK47 ah lagu Beegsado marka taagerasyaasha kubadda Cagtu kasoo Baxaan Garoonka Tottenham Hotspur.
Aweeys Shiikheey wuxuu heeytaa Dhalashadda Netherland wuxuuna leeyahay Labo xaas oo kala Dagan Netherland iyo Kenya iyo Caruur, waxaa 23 kii may ee Sanadkii tagay laga qabtay Garoon Caalami ah oo kuyaala London.
Dacwad ooge lagu magacaabo Barnaby Jameson ayaa sheegay in ujoodo kasta oo uu lahaa Aweeys ay ka dhexmuuqatay Xagjirnimo.
Muwaadin Soomaaliyeed oo ku noolaa wadanka Kenya magaciisana lagu sheegay Abdirahman Idris Hassan ayaa la sheegay in uu Xagjirnimaddda ku dhiiri galiyay Aweys shiikhoow sida laga ogaaday Qoraal ay isku dhaaafsadeen Alaadaha lagu sheegkeeysto.
Dacwad oogaha kasoo horjeeda Muwaadinka Soomaaliyed ayaa Maxkamad ka hor aqriyay Qoraal uu soo qoray Abdirahman Idris Hassan oo u Qornaa “ ilaaheey hakugu darajeejo Dilka David camiroon iyo Haweeneeyda Duqda ah ee Elizabeth.